Layout PCB, PCB Copy, PCB mivadika
PCB Clone, fanamboarana PCB, fanodinana SMT,
Fivoriamben'ny birao fanaovana pirinty vita pirinty sy famokarana betsaka
Fampandrosoana programa Chip
Fanalefahana puce fiara manidina
avy amin'ny admin tamin'ny 21-09-17
Afaka mahita seho sasantsasany amin'ny fiara mivadika fiaramanidina na sambo hafainganam-pandeha amin'ny sarimihetsika foronina siansa sasany isika. Milay be. Na dia ny fiara manidina amin'ny tena fiainana aza dia tsy manana ny fiasan'ny endrika malalaka hanova endrika toy ny amin'ny sarimihetsika, ny fiara manidina dia tsy nofinofy intsony. Fiara manidina lasa zava-misy i ...
Zavatra valo tokony hodinihina alohan'ny hamokarana tabilao fanaovana fizaran-tany
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-09-13
Amin'ny taona vaovao, manana prototype endrika vaovao hatolotra ho an'ny fivorian'ny PCBA ve ianao? Angamba ianao tapa-kevitra ny hametraka sombin-drafitra fitaovana ho famokarana marobe amin'ity taona ity, saingy mety mbola ho sarotra ny hamita ity asa ity voalohany! Amin'ity lahatsoratra ity dia te hizara zavatra valo t ...
Ny fanaovana kopia PCB dia hanohy hanao ezaka amin'ny aerospace
Vao tsy ela akory izay, namoaka tamim-pahombiazana ny satelita China Resources 3 02 avy ao amin'ny Taiyuan Satellite Launch Center ary niditra tamina orbit efa voatondro mazava. Hifanerasera amin'ny satelita loharanon-karena 3 01 izy io mba hiantohana ny fahazoana maharitra sy maharitra ny angona data stereo map. S ...
Ny fahaizan'ny fanavaozana ny Chip decryption dia manararaotra mampitombo ny fanavaozana faharoa
Satria maro ny olona no tsy mahazo ny hevitry ny decryption puce, ankehitriny miaraka amin'ny fivoarana mitohy sy ny fampitomboana ny indostrian'ny famoahana, ny hevitry ny decryption puce dia nitarina tamin'ny faritra midadasika kokoa, ary ny famerenana sy ny fanaovana kopia tsotra dia nilaozana. Na dia decryption puce aza ...
SCM decryption indostrialy rojo fampidirana: layout, fampidirana ny indostria, University, fikarohana ary ny fampiharana
Taorian'ny fihenan'ny toekarena manerantany tamin'ny 2013, ny indostrian'ny famoahana MCU an'i China dia niatrika olana maro, indrindra tamin'ireto lafiny manaraka ireto: voalohany, ny bizina famoahana sy ny vokatra dia tokana, ary ny herin'ny fampandrosoana indostrialy dia tsy ampy; Faharoa, misy ny overacacit ...
Fampandrosoana an-trano ny reducer amin'ny alàlan'ny kopian'ny PCB
Fantatra fa tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny governemanta sy ny indostria dia mandinika bebe kokoa ny sehatry ny robot satria ny robot indostrialy dia afaka mamerina miasa mandritra ny fotoana maharitra ary miasa amin'ny tontolo mampidi-doza sy henjana. Na dia firenena miasa lehibe aza i Shina, miaraka amin'ny fahatongavan'ny ...
Ny fanaovana kopia ny birao fizaran-tany dia nanomboka ny tifitra voalohany teo amin'ny tsena stratejika nasionaly
Ny fanaovana kopia ny birao boribory no fitifirana voalohany eo amin'ny tsena stratejika nasionaly. Amin'ny ankapobeny, ny fizotran'ny kopian'ny PCB dia toy izao. Ny rakitra PCB, antontan-taratasy faktiora (BOM), rakitra an-tsokosoko ary rakitra ara-teknika hafa an'ny vokatra tany am-boalohany sy ireo rakitra famokarana pirinty vita amin'ny lamba vita amin'ny landy PCB dia naverina 1: ...
Ahoana ny fanatsarana ny hafainganan'ny famakiana ny solaitrabe
Ahoana ny fanatsarana ny hafainganan'ny famakiana ny solaitrabe? Raha ny vaovao farany eo amin'ny sehatry ny indostria dia nitombo 25% ihany koa ny hafainganan'ny famakiana birao an'ny PCB, ary nitombo in-5 ny hafainganana. Ny vidin'ny famakiana solaitrabe isaky ny zavatra dia ambany. Ny ampahany fanampiny dia azo ampiana amin'ny ongoin ...
Inona no fampiasana prototyping?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-08-26
Ny famokarana prototype dia tsy rohy manan-danja amin'ny fizotry ny famolavolana vokatra, fa koa rohy ilaina amin'ny fanamarinana sy fitiliana alohan'ny famokarana betsaka. Na ny vokatra mahaleo tena R & D sy ny famolavolana na ny fampivoarana ny injenieran'ny vokatra, ny famokarana prototype dia ...
Orinasa mandika PCB dia mampiroborobo ny fampandrosoana amin'ny alàlan'ny fanahafana sy fanavaozana
Kopian'ny PCB, izany hoe amin'ny alàlan'ny haitao fikarohana, 1: 1 famerenana sy famerenana ireo rakitra PCB misy vokatra elektronika, rakitra antontan-taratasy (BOM), rakitra an-tsokosoko ary rakitra famokarana pirinty efijery PCB, ary avy eo ampiasao ireo rakitra teknika ireo ary rakitra famokarana ho an'ny PCB manu ...
Decryption Mm908e621, decryption mm908e622, decryption mm908e624
Betsaka ny tranga naharesen'ny teknolojia sitch ny faharanitan-tsaina. Ohatra, ireo tetikasa famoahana chip malaza an'ny Motorola, Samsung ary marika hafa mifandraika amin'izany dia efa niara-niasa tamin'ny sitch tamin'ny taona vitsivitsy lasa izay. Ho an'ny andiany feno mic 8-bit mora vidy sy avo lenta ...
Teknikan'ny tabilao misy sosona marobe ao anatin'ny fizotry ny kopian'ny circuit circuit
Voalohany indrindra, raha ny fizahana no jerena, dia mazàna no nojerentsika ny sisiny misy tarehintsoratra marobe, izany hoe ny sosona ambony. Alefaso amin'ny Quickpcb ny sary avo lenta, kopia ny singa rehetra ao aminy, fenoy ny kopian'ny tabilao ambony, ary tahirizo ny rakitra B2P. Avy eo, atsimbadintsika ny PCB ary hizaha ny sisiny mihodina ...
Sokajy IC MCU Adapter Socket
Adiresy: Room 302, RongXing Building, FuHao Garden, 168 # Road Bulong, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong, China.
Shenzhen Sichi Technology Co., LTDpolitika Fiarovana fiainan'olonaFepetra